Ndị uwe ojii na-ahụ maka mgbasa ozi ọha na eze na-akụkwa ọzọ! | Martech Zone
N'ihi na ogologo oge ka ndị mmadụ mara m, ana m agbagọ megide Jehova na-achịkwa ndị uwe ojii na soshal midia. Ha na-eme ka m daa ara. Ruo afọ iri, otu n'ime arụmụka ndị na-aga n'ihu bụ ma ị kwesịrị ijikọ ndị gị amaghị online.
It surfac ọzọ ụnyaahụ mgbe m keere òkè Dan Schawbel, Ihe kpatara m ji anabata arịrịọ ịkpọtụrụ LinkedIn niile. Dan depụtara ihe ise mere ọ ji ejikọ ya na ndị bịara abịa, gụnyere ndị na-ezo aka, nyocha, mmata, mmetuta na akara ngosi
Mana enwere otu ndị naysayers na-aga n'ihu na-akwado nkwenye na ọ bụ ụkpụrụ omume mmekọrịta mmekọrịta dị egwu ma ọ bụ mmebi nke oge na-aga n'ihu mgbe ị jikọtara na mgbasa ozi mmekọrịta na onye ị na-ahụtụbeghị ma ọ bụ na ị nweghị mmekọrịta. Offọdụ iwu ndị e depụtara na mkparịta ụka a agaghị ekwekọrịta ọ gwụla ma ị zutere mmadụ ihu na ihu. Ma obu oburu na inwere bara uru mmekọrịta mbụ.
Ndi bekee… kedu ihe bụ nsogbu nke netwọkụ mmekọrịta na-agafe obodo, steeti, mba, oge na kọntinenti ma ọ bụrụ na ị naghị eji ya I kwenyere n'ezie na ojiji kachasị mma nke akụ a dị ịtụnanya bụ ịmegharị netwọkụ gị na-anọghị n'ịntanetị n'ịntanetị?
Kedu ihe mere na ị gaghị apụ dọpụta ochie rolodex gị ma kpọọ ndị enyi gị n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ka ha kpọọ Dungeons na Dragons?
Know ma ihe m na-akpọ ndị mmadụ na anaghị m ejikọ na mgbasa ozi mmekọrịta? M na-akpọ ha ndị ahịa nwere ike, nwere ike itinye ego na ya, nwere ike ịbụ ndị ọrụ, nwere ike interns, nwere ike ịbụ ndị enyi, ndị mmekọ, ndị nwere ike ịre ahịa, nwere ike mentors na nwere ike ibe.
Ee ee, achọrọ m ijikọ ha. Achọrọ m inyere ha aka. Achọrọ m ige ha ntị. Achọrọ m ịnụ ihe ha nwere. Achọrọ m ijikọ ọtụtụ dị ka mmadụ nwere ike ime! Ma mgbe m chọrọ enyemaka, achọrọ m ịgakwuru ha ma rịọ maka ya. Maa amụma?! Ana m enweta ọtụtụ enyemaka site na Njikọ Ahụtụbeghị m.
Kechioma maka anyị niile, na ngwaọrụ nwekwara ikike kwupu! Enwere m ike ime nke ahụ ma ọ bụrụ na ha na-akparị mmadụ, na-akwagharị ma ọ bụ na-egbu m oge. Enwekwara bọtịnụ spam na-akọ ma ọ bụrụ na ha gafee akara. Anaghị m arịọ onye ọ bụla maka akụrụ ma ọ bụ ka ụmụ m (ma), ana m arịọ maka ihe m ga-eme jikọọ na ndị m nwere mmasị n'ezie nzute.
Ọ dị ịtụnanya nye m na otu ndị ahụ na-akatọ ndị folks banyere ijikọ ndị ha na-amaghị ga-ala azụ ịgafe ụlọ ga-ejupụta n'okporo ụzọ iji kpughee kaadị azụmahịa ha na ihu gị, ma ọ bụ kpọọ gị oku iji nwaa ire ngwaahịa ha. Ma ha na-anọdụ ala n'ebe ahụ na-asọ oyi ma ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ na ihe nchọgharị weebụ.
Nke a bụ echiche… kpuchido iwu gị niile. Ihe m na eme na aruru m… na netwok m.
Tags: LinkedInnjikọ njikọnetworkin networkelekọta mmadụ mediaụkpụrụ mgbasa ozi
Jenụwarị 8, 2013 na 1:31 PM
a na-eche echiche ntakịrị banyere isiokwu a dịka oge.
Kedu ihe anyị na-akpọ ndị mmadụ dara iwu ndị ọzọ tiri?
Mgbe ụfọdụ, anyị na-akpọ ha ndị ọhụụ. Anyị na-akpọ ha ndị ọsụ ụzọ. Anyị na-akpọ ha
ndị ọchụnta ego.
Ma n’oge ndị ọzọ, anyị na-akpọ ndị dara iwu ndị omekome.
Ọ dị m ka ọdịiche dị n’etiti onye omekome na ihe ọhụụ abụghị
n'ezie larịị nke ikike nke ndị setịpụrụ iwu. Anyị na-atụle ọtụtụ
ndị na-eme mgbanwe ga-abụ ndị dike, ma ha na-emebi iwu ma na-alụ ọgụ
ọchịchị nke ha.
Kama, echere m na ihe dị iche bụ n'ezie gbasara iwu n'onwe ha: mee ya
iwu na-enyere ndị mmadụ aka, ka ha na-eme ihe ọjọọ karịa mma?
Banyere mgbasa ozi mmekọrịta, ụlọ ọrụ na-eguzobe ọtụtụ iwu
na-eme ka Njirimara. Facebook nwere iwu banyere
ọdịnaya nke foto mkpuchi na onye enyere ka ịnweta akaụntụ nkeonwe.
LinkedIn nwere iwu (karịa nke nkwanye, n'ezie) gbasara onye
ị kwesịrị ijikọ na.
E nwekwara iwu ndị dịka ọ na-apụta n'obodo. “Abụla a
jerk, ”dịka ọmụmaatụ. Ma ọ bụ: “Gbalịa chọpụta n'onwe gị, ma jụọ
maka enyemaka. ”
M na-eche na ị na-amalite ịgafe akara si innovator ka mpụ mgbe ị
malite ịdị ka ndị na-eme mpụ. Ọ bụrụ na ị nwaa ijikọ
onye ọ bụla nọ na LinkedIn ma zipụ ha otu ozi yiri nke ahụ, ị ​​malitere
yiri spammer. Ọ bụ mgbe ahụ ka ndị mmadụ malitere ikwu banyere “
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na usoro njikarịcha njikwa akụ gị dabere ị nọ
n'ime mmadụ ole na ole na-eji atụmatụ ahụ, ị na-aga njem
na uche ndị mmadụ nke ikpe ziri ezi.
Iwu bụ isi nke obodo ọ bụla. Doug dere “debe iwu gị
onwe gi. Ihe m na-arụrụ m ọrụ for na netwọkụ m. ” Echere m na nke
gabigara ókè nke a: “Debe iwu gị nanị gị. Ihe m na-arụ ọrụ
maka mụ na ndị ọrụ ibe m ndị ọzọ na-ezu ohi n'ụlọ akụ m. ”
Enwere iwu ọ bụla na mgbasa ozi mgbasa ozi nke a na-apụghị imebi? Mba Ma enweghi
iwu n'obodo ọ bụla nke na-agaghị enwe ihe kpatara ya. Nke ahụ bụ
kpom kwem ihe kpatara na ọ dị mkpa na anyị ga na-ekwu maka iwu, yabụ anyị maara nke
ndị — ọ bụrụ na ọ dị — kwesịrị ka e debe ha.
Jenụwarị 8, 2013 na 3:04 PM
“Iwu” - m na-ekwu bụ na ha abụghị iwu ọ bụla edebe n'ezie. Enweghị iwu ọ bụla yet ma ndị mmadụ na-anwa ịgbalị ịkwanye echiche ha dịka iwu bs.
Jenụwarị 8, 2013 na 3:09 PM
“Enweghị iwu ma."
Kedu ka anyị ga-esi mara mgbe enwere iwu? Kedu maka iwu ndị ụlọ ọrụ ahụ kwuru na nke ha TOS?
N'ikpeazụ, ọ bụla iwu bụ naanị echiche. Echere na ọ bụ echiche ọtụtụ mmadụ na-ekerịta (kama naanị ndị nwere ike) mana iwu na-amalite dị ka echiche ma na-anọgide na-enwe echiche, ruo mgbe ebighị ebi.
Jenụwarị 8, 2013 na 3:57 PM
Iwu bụ ihe na - arụ ọrụ na anaghị arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ gị kwesịrị inyere gị aka ikpebi otu ị ga - esi nye ndị na - ajụ ase ihe. Ma, n'ezie, ka ị na-a howa ntị n'otú ndị ọzọ si eji mgbaasị eme ihe, ị ga-amụta ihe na-adịghị arụ ọrụ maka gị. Anyị anaghị agwa ndị mmadụ na ha “enweghị ike” ma ọ bụ “ekwesịghị”… anyị kesara ha etu nke ahụ siri metụta ụlọ ọrụ ndị ọzọ n’oge gara aga wee hụ otu esi nwalee ya n’emeghị mmebi ọ bụla na akara ha.
N'ezie, enwere okwu nnabata ndị mmadụ ga-asọpụrụ, mana ndị ahụ abụghị iwu mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze… ndị ahụ bụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ na iwu a ga-agbaso.
Anaghị m agwa gị na ị ga-ekwenye na arịrịọ LinkedIn ọ bụla. Naanị m na-agwa gị na ịme nke a bụ ihe ịga nke ọma maka m na enweghị nsonaazụ ọ bụla. Ya mere… agwala ndị ọzọ na ha ekwesịghị ime ya… ma eleghị anya ọ ga-arụ ọrụ maka ha.
Jenụwarị 8, 2013 na 4:48 PM
N'agbanyeghị na m bụ LinkedIn junkie, anabataghị m Kpọọ LinkedIn ọ bụla m nwetara, mana m na-anabata ndị niile nwere ezi uche ijikọ ma ugbu a ma n'ọdịnihu Mana ịma mma ya bụ na anyị nwere ike ịhazi nke ọ bụla iwu ma ọ bụ ụkpụrụ anyị ga-agbaso ma ọ dịghị mkpa i toomi ihe ndị ọzọ na-eme.
Jenụwarị 8, 2013 na 4:52 PM
Enwere ụfọdụ ndị spammers mara mma ebe m na-eleghara anya. Mana m ga-eme atụmatụ na 99% + nke ndị fol chọrọ ijikọ m dị mkpa maka ụlọ ọrụ m - yabụ m na-eme ya.
Jenụwarị 8, 2013 na 4:53 PM
Ana m akwado ozi a.
Enwere iwu, mgbe ahụkwa enwere nhọrọ onwe onye. Imirikiti usoro mgbasa ozi mmekọrịta dị nnọọ ole na ole iji usoro iwu eji eme ihe. LinkedIn mere mgbanwe ahụ oge ọzọ nke mere ka mmadụ rịọ njikọ maka gobs nke ndị mmadụ, dị mfe. Enwetara m ahụhụ naanị ugboro abụọ mgbe m jiri ya wulite m rolodex, kedụ ihe ihe ndị ahụ gwara m gbasara ndị ahụ? Na m nwere ike ọ gaghị achọ ka mụ na ha nọrọ. O doro anya na LinkedIn jiri ụdị nke otu koodu ahụ na usoro nkwado ha. Ọ bara uru? Ọfọn, ọ dabere. Ọ bụrụ na m hụ onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi nke nwere njikọ iri abụọ ma ọ bụ iri atọ, ha onwe ha nwekwara ọtụtụ nnabata maka ihe niile site na mgbasa ozi, na ịre ahịa email, ịkpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ, m na-ajụ onwe m ajụjụ ole na ole. Hà nwere ike iso ọtụtụ ndị na-emekọrịta ihe, soro ha rụọ ọrụ ụfọdụ? Ma ọ bụ na ha na-atụnyekarị oke mma, ozi dị mkpa (na okwu ndị ọzọ, bara uru) nye ndị mmadụ? Ka ọ̀ bụ nanị okwu metụtara ofufe aha?
N'ọtụtụ oge, anyị niile maara nke ọma mgbe a na-atụgharị anyị n'ụzọ dị mma, ma ọ bụ n'ụzọ ọjọọ.
Jenụwarị 10, 2013 na 12:00 PM
Doug: Ekwenyere m na otu nha anaghị adabara ihe niile, mana enwere otu iwu nke dị mkpa –Nkwekọrịta Onye Ọrụ LinkedIn. Maka ebumnuche a, yana mmadụ ole na ole ndị ọzọ, a na m ahọ ndị mara mma n’ihe metụtara njikọ. Nke a bụ ego m abụọ: http://linkedinstitute.wordpress.com/2013/01/10/its-about-connecting-not-collecting/
Jenụwarị 10, 2013 na 12:05 PM
Esemokwu ziri ezi, Anthony. Anyị nwere ike ịrụ ụka maka nkwekọrịta Onye ọrụ LinkedIn ruo nwa oge, ebe ọ bụ na ha anaghị eri nri nkịta ha. Banye na LinkedIn ugbu a, ị ga-enweta ndepụta nke ndị ha kwadoro ka ị jikọọ… n'agbanyeghị mmekọrịta gị na ha. Cheers!
Jenụwarị 10, 2013 na 12:16 PM
Ebe kachasị mma. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile ka anyị ga-a theụ ọgwụ dọkịta dọkịta nyere anyị iwu. : ^) Daalụ maka ịgbakwunye na mkparịta ụka ahụ!